'Inkxaso yeApple' yenza kube lula ukubona iwaranti kunye nokugubungela iimveliso zethu | IPhone iindaba
'Inkxaso yeApple' yenza kube lula ukubona iwaranti kunye nokugubungela iimveliso zethu
Ingelosi Gonzalez | 07/04/2021 20:00 | Izaziso, Iimveliso ze-Apple
Ukuthenga entsha i sixhobo kwinxalenye yomsebenzisi kufuneka ibe noluhlu lweempawu ezisisiseko ukuze umthengi ahlale ezolile. Okokuqala, ulwazi olusemgangathweni ngesixhobo osithengayo. Okwesibini, ukungafihli nto malunga nendlela yokuhambisa, ixesha eliqikelelweyo kunye nomhla wokuhambisa ngokuqikelelweyo. Kwaye okokugqibela, umboniso we ukugubungela kunye newaranti enikezelwa yinkampani. I-Apple ibonelela ngewaranti yonyaka omnye kuzo zonke izixhobo ezinokubakho zokuthenga i-inshurensi eyongezelelweyo, iAppleCare. Ngohlaziyo olutsha losetyenziso 'Inkxaso yeApple' Singajonga iwaranti yezixhobo zethu kunye nokugubungela imeko xa sinokufumana iAppleCare.
Jonga ukugubungela isixhobo sakho kwiNkxaso yeApple
Dinga uncedo? Fumana inkxaso yezobuchwephesha oyifunayo kwiimveliso zakho ozithandayo zeApple- zonke zisuka endaweni enye. Inkxaso yezobuchwephesha yeApple ikunika ukufikelela okwenzelwe wena kwizisombululo zazo zonke iimveliso zakho ze-Apple kunye neenkonzo. Funda indlela yokulawula imirhumo yakho okanye usete kwakhona iphasiwedi yakho ye-ID ye-Apple, phakathi kwezinye izinto.
U-Apple wagqiba Qalisa usetyenziso apho kugxilwa khona kwinkxaso kunye nenkonzo yezobugcisa akukho sidingo sokuphambana kwiwebhusayithi yakho. Yinkxaso yeApple, usetyenziso olulula, olunobhetyebhetye nolugqibeleleyo olufumanekayo lwe-iOS kunye ne-iPadOS. Njengoko iminyaka ihamba, iapps ivithamini ngeendaba ezininzi ngakumbi kwaye iye yaba yindawo ekubhekiswa kuyo yokucela uncedo kwinkxaso yobuchwephesha kwaye icele nokuqeshwa ukuba uye kwiVenkile yeApple.
Le yindlela onxibelelana ngayo nenkxaso yeApple
Entsha 4.2 version yazisa ngezinto ezintathu ezintsha eziphucula ukusetyenziswa kunye nokubonelela ngemisebenzi emitsha kubasebenzisi. Ekuqaleni, Ukukhetha isikhumbuzi kudityanisiwe ukubhukisha ngokutsala umnxeba okanye imiyalezo ebhaliweyo. Oku kufakwe kwiVenkile yeApple ebonakalayo apho bakwazisa khona xa iGenius ikhutshiwe kwaye ungaya evenkileni. Nangona kunjalo, kule nguqulo intsha xa usenza ugcino unokuseta isikhumbuzi ngokuzenzekelayo.
Ikwadityanisiwe Isixhobo sokujonga ukogquma kunye nenqanaba lewaranti kwiimveliso zethu. Kwimeko apho sine-AppleCare, sinokubona imiba eyahlukeneyo esiyigubungeleyo kunye nendlela yokufikelela kwinkxaso esiyifunayo. Ukongeza, i I-App Clip ukujonga ngokulula iwaranti Yazisa i inombolo ye-serial okanye ngokukhetha isixhobo se-ID yethu ye-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » 'Inkxaso yeApple' yenza kube lula ukubona iwaranti kunye nokugubungela iimveliso zethu